Wararka - Doorka gearboxes
Gearbox waxaa loo isticmaalaa, sida marawaxadaha dabaysha.Garbox waa qayb farsamo muhiim ah oo si weyn loogu isticmaalo marawaxadaha dabaysha. Shaqadeeda ugu weyni waa inay u gudbiso awooda ay dhaliso giraangirta dabaysha hoosteeda ficilka awooda dabaysha koronto-dhaliye oo ay ka dhigto inay hesho xawaaraha wareega ee u dhigma
Badanaa, xawaaraha wareega ee giraangiraha dabayshu aad ayuu u hooseeya, taas oo ka fog xawaaraha wareega ee uu u baahan yahay matoor dhaliyaha koronto dhalinta. Waa in lagu ogaadaa saameynta sii kordheysa ee qalabka kala duwan ee qalabka, sidaas darteed gearbox-ka waxaa sidoo kale loo yaqaan sanduuqa sii kordhaya.
Sanduuqa 'gearbox' wuxuu wataa xoogga ka dhasha giraanta dabaysha iyo xoogga falcelinta ee la soo saaro inta lagu guda jiro gudbinta qalabka, waana inuu lahaadaa qallafsanaan ku filan si uu u qaado awoodda iyo daqiiqad looga hortago cilladaha iyo in la hubiyo tayada gudbinta. Naqshadeynta qalabka 'gearbox' waa in lagu fuliyaa iyadoo loo eegayo qaabeynta qaabeynta, ka shaqeynta iyo xaaladaha isku imaatinka, ku habboonaanta kormeerka iyo dayactirka awoodda gudbinta ee matoorka marawaxadaha dabaysha ah
Gearbox wuxuu leeyahay shaqooyinka soo socda:
1. Dardargelinta iyo hoos u dhaca waxaa badanaa loo yaqaan sanduuqyo xawaare isbedbeddela.
2. Beddel jihada gudbinta. Tusaale ahaan, waxaan u adeegsan karnaa laba qalab geerka si aan si toos ah ugu wareejino usha kale ee wareega.
3. Beddel miisaanka wareega. Isla xaaladaas awoodeed awgood, sida ugu dhakhsaha badan qalabku wuu wareegayaa, wuu sii yaraanayaa culeyska usheeda dhexe, iyo dhanka kale.
4. Hawlaha xajin: Waxaan ka sooci karnaa mishiinka culeyska adoo kala soocaya labo gear oo asal ahaan xariir ah. Sida kala qabashada biriiga, iwm.
5. Awood qaybi. Tusaale ahaan, waxaan u adeegsan karnaa hal matoor si aan ugu wadno shabaqyo badan oo addoon ah iyada oo loo marayo wiishka weyn ee gearboxka, sidaasna lagu ogaanayo shaqada hal matoor wadista xamuul badan.
Marka loo barbardhigo sanaadiiqda kale ee warshadaha, Sababtoo ah qalabka korontada ka dhaliya dabaysha waxaa lagu rakibay qol mishiin cidhiidhi ah tobanaan mitir ama xitaa in ka badan 100 mitir oo dhulka ka sarreeya, Muga iyo culeyska u gaarka ah ayaa saameyn muhiim ah ku leh qolka mashiinka, munaaradda, aasaaska, culeyska dabaysha cutubka, rakibidda iyo kharashka dayactirka, Sidaa darteed, waxaa si gaar ah muhiim u ah in la yareeyo cabbirka iyo culeyska guud; Marxaladda guud ee naqshadeynta, qorshayaasha gudbinta waa in la isbarbar dhigaa oo lagu hagaajiyaa mugga iyo culeyska ugu yar iyadoo ujeeddada laga leeyahay la kulanka shuruudaha kalsoonida iyo nolosha shaqada; Naqshadda qaabdhismeedku waa inay ku saleysnaataa ujeeddada la kulanka awoodda gudbinta iyo caqabadaha bannaan, oo la tixgeliyo qaab-dhismeed fudud, hawlgal la isku halleyn karo iyo dayactir ku habboon inta ugu macquulsan; Tayada wax soo saarka waa in lagu hubiyaa xiriir kasta oo ka mid ah habka wax soo saarka; Inta lagu jiro hawlgalka, xaaladda socoshada ee gearboxka (heerkulka dhalista, gariirka, heerkulka saliidda iyo isbeddelada tayada, iwm.) Waa in lala socdaa waqtiga dhabta ah dayactirka maalin laha ahna waa in loo fuliyaa iyadoo loo eegayo qeexitaannada.